The Nubia Red Magic 5G pụtara na leaked ezigbo foto | Gam akporosis
N’oge na-adịbeghị anya, anyị na-ezisa ihe onyonyo ohuru nke TENAA tinyere na ndepụta nke Red Magic 5G si Nubia. Uzo nnabata nke ndi China etinyegoro ndepụta nke ngwụcha arụmọrụ a obere ihe karịrị otu izu gara aga, mana na-enweghị ihe ọhụụ.
Onyinyo ohuru nke anyi natara ugbua site na nzacha nzere na-akwado ihe TENAA gosipụtara anyị na nsụgharị ya. Nke a abanyelarịrị netwọk ahụ n'oge na-adịbeghị anya, anyị na-egosi ya n'okpuru.
Egwuregwu bench ekere òkè na awa ole na ole gara aga nnweta ihe eji eme ihe na Red Magic 5G ekwentị iji kpughee imepụta ya na ezigbo akpụkpọ ahụ. Dị ka a pụrụ ịhụ na onyogho dị n'okpuru, ngwaọrụ ahụ na-abịa na mkpochi azụ na-adọrọ mmasị, nke ejiri usoro "X" gosipụtara nke dabara nke ọma na mbadamba azụ, nke a buru ibu ma hụkwa. Ya onwe ya ahọrọla agba abụọ: acha ọbara ọbara na-acha anụnụ anụnụ, nke bụ otu ihe ahụ TENAA mere ka anyị mara, mana ya na ụda ọkụ.
Red Magic 5G leaked ke ezigbo foto
Red Magic 5G nwere akara ogologo nke gbatịrị site na elu ruo na ala symmetrically. N'elu nke a, anyị na-ahụ igwefoto azụ nwere okpukpu atọ nke ekwentị ahụ nwere, nke dị n'okpuru ọkụ ọkụ ọkụ ma debe ya n'akụkụ akụkụ etiti nke usoro azụ ahụ dum. N'aka nke ya, edere akara ngosi 5G nke na-egosipụtakwa njirimara netwọkụ a, nke a na-atụ aro n'aha aha ama ama. N'ezie, aha Red Magic nwekwara ike ịhụ n'etiti etiti ahụ.
Ime Anwansi Anwansi Anwansi mara 5G ka ọ bido na Machị. Ngwaọrụ a ga - abịa Snapdragon 865, Igwe OLED 6.65 nke anụ ọhịa na 144 Hz na-enye ume ọhụrụ, na atụmatụ ndị ọzọ na nkọwapụta teknụzụ e mere maka egwuregwu na ndị ọrụ na-achọsi ike.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Nubia Red Magic 5G na-egosi na ezigbo foto nke na-akwado njirimara pụrụ iche ya